Kedu ihe kachasị mma n'ule ule na India?
Ule bụ otu n'ime oge kachasị mkpa nke usoro mmemme software. Na ohere na ugbua ule adighi eduzi ya, enwere ike ime ka enweghi ike ighota ihe ojoo na ihe omuma na ngwanro. N'ihi nke a, ọ dị oke mkpa inwe echiche nke ngwanrọ kachasị mma nke ịnweta ule iji nweta ya.
Usoro Kasị Mma Nyocha:
1. Nyocha akwụkwọ ọkachamara nke ọkachamara software ọkachamara (CSTP):
2. Ihe nlere ule nyocha akwukwo (CTM):
3. Usoro akwukwo nhazi akwukwo mma nke akwukwo nke oma (CSQM):
4. Usoro akwukwo nyocha akwukwo ndi nkiti nke akwukwo nyocha (CSTAS):
Mụọ Nyocha Software
Nke a bụ onye nwe otu akụkụ kachasị mma maka nyocha software nke ndị ọkachamara ga-anwa.
Ụkpụrụ akwụkwọ nyocha akwụkwọ nyocha akwụkwọ nyocha (CSTP)
Usoro akwụkwọ nyocha akwụkwọ nlele akwụkwọ (CTM)
Usoro akwụkwọ nchịkwa njikwa njikwa njikwa software (CSQM)
Usoro akwụkwọ nyocha akwụkwọ nyocha ngwa ngwa pro cation (CSTAS)
Asambodo a maka usoro ule nyocha nke software bu n'uche itinye uche na ihe di nkpa na ihe kacha mma nke ule nyocha. Ezubere usoro ihe omume a ruo n'ókè nke na ọ gaghị enwe ike ịchọta ihe dị iche iche na ụmụ agbọghọ ga-achọ ọrụ ha na nyocha usoro nyocha. Usoro ntinye akwụkwọ a na-agba ndị ọkachamara ume ka ha jide n'aka na ha na-emepụta ule kachasị mma nke a pụrụ iji mee ihe iji nweta ike iji weta ngwanrọ ahụ.
Ndị na-esote bụ mpaghara nke akpan akpan na usoro ntinye akwụkwọ a na-enye ndị mmeri:
Ịmepụta na imezue ikpe ikpe maka ihe omume agile
Ịmalite ịmepụta ule na-akọwapụta nke a ga-enwe ike iji ya mee ihe n'ọnọdụ dịgasị iche iche
Ntughari n 'ogbako ala
Ịmepụta usoro kachasị mma, ịbịaru nso, na ịhazi maka ịmepụta ikpe ikpe
Na-elekwasị anya na ị na-atụ anya ihe ndị dị mkpa maka nhazi nke ule
Na-eme usoro nke ezughị okè na-eso
Na-egosi ụzọ maka ịmara na njikwa ziri ezi maka mkpa ndị ahịa
Na-etinye uche na ihe dị mkpa nke ule akpaaka
Omume a na-enye ndị nhọta n'ime nyocha ngwa ngwa iji nweta nyocha software achọrọ iji kwadebe maka inyere ha aka ịkọkọta ozi ha na mpaghara nke ọ bụla.
Usoro ntinye aka bu nke ndi n'ozuzu ndi mmadu bu ndi nwere afọ ole na ole n'inwe ule ma ha abughi ndi okachamara. A na-ahụ usoro nyocha usoro ngwanrọ nke a dị ka ụzọ nkeji nke IIST maka ndị ọkachamara nyocha. Ebumnuche nke usoro ahụ ka e mere ka ọ bụrụ ebe a na-ewusi ike na mmụta nke ndị ọkachamara.
Ndị na-esote bụ mpaghara nke ihe ndị a na-enye:
Na-eji ụdị ule dị iche iche eme ihe
Nlekọta ule nke ule
Nyocha na imezi nyocha na usoro
Na-etinye uche na njikwa ihe ize ndụ
Igosipụta usoro na usoro maka ule nyocha
Igosipụta ihe achọrọ nke njirimara mmezi software.
Maka ihe ka ukwuu, ndị ọkachamara nwere afọ ole na ole nke itinye aka na nyocha software ma chọọ ịmalite nghọta na mmepe mmepe na-aga n'ihu na asambodo a.
Ndị ọzọ na-etinye uche na imeziwanye ngwa na ozi nke ndị ọkachamara site na nyocha ngwa ngwa na-akwadebe, usoro ịgba akwụkwọ a na-emetụta ịmepụta ikike nke ịkwado njirimara software. Asambodo ahụ na-agbakwunye ndị ọkachamara leeway site n'inye ha àgwà nke na-emeso àgwà nke ngwanro ahụ. Ndị ọkachamara nke nwere asambodo a bụ nke nnukwu akụkụ nke mkpakọrịta ndị ahụ dị mma masịrị ya maka ịchọta ngwakọta nke nyochaa software ahụ na ịkwado àgwà ya.
Ndị na-esote bụ mpaghara nke nkọwa zuru ezu na usoro ntinye akwụkwọ a na-enye:
Ịzụlite ụzọ maka ịmepụta àgwà nke ngwanro ahụTọọ ihe osise
Na-arụ ọrụ maka mmepe nke arụmọrụ maka nkwado nkwenye software
Ịme usoro nlele maka ikwere na njirimara software
Ịkwado nkwado maka mmepe software na mwekota
Na-arụ ọrụ na nhazi ngwanrọ
Ịzụlite atụmatụ maka mmepe ngwanrọ
Ịhazi nlele na nyocha banyere software ahụ
Usoro ntinye akwụkwọ na-emetụtakwa gburugburu njirimara software ahụ, tinyere usoro ndị a na-eme ka ezigbo ngwakọta mgbe ejikọtara ya na ụfọdụ asambodo nke ule nyocha.
Nke a bụ otu n'ime usoro nyocha ndị ahụ na-egosi na ndị nwe obodo na-anwale ule nyocha. Ndị ọkachamara nke na-achọ ịmalite nghọta ha na ịmalite usoro ọhụrụ iji meziwanye usoro nyocha software na-ahọrọ usoro ntinye akwụkwọ a. Ntughari maka ule nyocha nke software ka enyere ndi okachamara ndi nwere ihe ruru 10 afọ nke itinye aka na nyocha software. Ọ nwere ọtụtụ ọkwa na echiche dị iche iche maka ịmepụta ụdị nyocha ngwa ngwa na ịkwado ihe ga-esi na ya pụta.
Ndị na-esote bụ ihe ndị a na-enye ndị mmeri:
Na-egosipụta ụzọ aghụghọ nke ule akpaaka
Edebe ikpe ikpe iji mee ka ihe nyocha nke nyocha
Ịzụlite usoro na ụzọ maka ule nlele
Ịmepụta na ịmepụta injinia nke ule inwale
Ịmepụta ule ikpe maka ịkwado ogo software ahụ
Na-egosiputa arụmụka ule maka ịchekwa ngwanrọ ahụ maka ihe ize ndụ ndị nwere ike iche
Asambodo a bụ otu n'ime ọkwa nke asambodo na nyocha nke nyocha software ma na-eme ka nghọta kachasị dị mfe maka nyochaa software.
naanị 2 Days